Rudzi: bhizimisi uye mari
Howitzer "Hyacinth". Cannon "Hyacinth-B": hwokugadzira hunhu uye mapikicha
Zvichida muma50-60s ezana ramakore rapfuura, kugadzirwa kwetsika dzenhare muUSSR dzakapotsa dzamira. Panguva iyoyo, maonero aivapo mudzidziso yechiuto aive ekuti ramangwana raive muzvombo. Mumamiriro ezvinhu akadaro, vagadziri ...
Vending - kubva kuChirungu. "Vending" zvinoreva "kutengesa kwekutengesa kwezvinhu zvakasiyana siyana nemasevhisi kuburikidza nemichina yekutengesa." Duramazwi rehupfumi rinopa chirevo chakafanana. Kutengesa michina Kutengesa uchishandisa michina yebhizinesi rekutengesa zvinogoneka ...
Kuzvibata-wega ... Nheyo, musimboti, mashandiro, nzira dzekuzvibata-wega. Sangano kuzvibata-manejimendi
Kuzvibata-manejimendi ndeimwe yeakanyanya kukosha mamiriro ekuti ubudirire. Nekudzidza maitiro ekushandisa nguva yako nenzira kwayo, unogona kushanda zvine mutsindo kuzadzisa zvinangwa zvako. Tsananguro yekuzvibata-wega Paunobvunzwa kuti chii ...
Kornet inorwisa-tangi missile system. ATGM "Kornet-EM". ATGM "Kornet-E"
Kubva Hondo Yenyika Yekutanga, matangi akakurumidza kuve musoro chaiwo wevacheche. Pakutanga, kunyangwe paine akashongedzerwa nezvombo zvekare, havana kusiya mukana wevarwi. Asi kunyangwe panguva yechipiri Hondo Yenyika, ...
IPTV ndiyo inogona kunge iri nyore uye yemazuva ano nzira yekutarisa TV. Kusiyana nemhando dzakajairika dzedhijitari TV (tambo, satellite uye yepasi), IP-TV ibasa rekudyidzana rakazara. IPTV yakasarudzika, ...
Kuongorora bhizinesi kukoshesa kunosanganisira imwe nzira, inonetsa inoshandira iyo inobatsira muridzi kuona kukosha kwekambani, kusimba kana rimwe bhizinesi. Inogona kudikanwa mumamiriro ezvinhu akasiyana. Kuongorora kukosha kwemusika webhizinesi kunogona ...
Vanhu vazhinji veSoviet vakadzidza nezve napalm chete mumakore makumi matanhatu, vachiona mishumo yeTV kubva kuhondo yeVietnam. Kupisa kunotyisa, vakakuvara uye vakafa vana, kupisa maguta nemisha zvakakonzeresa ...
Maitiro ekubhadhara mutero wekufambisa kuburikidza ne "Gosuslugi"? Bhadhara mitero online, kuburikidza nebhangi
Maitiro ekubhadhara mutero wekufambisa kuburikidza ne "Gosuslugi"? Muchokwadi, iyi nyaya inoshungurudza vagari vazhinji vemazuva ano. Mushure mezvose, mumwe haagare achida kumira mumutsetse kubhangi kwenguva yakareba kuti agadzirise maakaundi nehurumende. Dzimwe nguva…
Iko kudikanwa kwekutarisa nemazvo iyo yakagashirwa chivakwa, uyezve komisheni iyo yakatarwa midziyo inokonzerwa nemitero mutemo. Maitiro ekupedzisira achakurukurwa muchinyorwa. Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti ku ...
Chii chinonzi pension fund? Mabasa makuru uye maitiro ekushandisa
Maiwe, munyika ino inofa pane zvakawanda zvinoitika zvisati zvave pasi pemunhu. Uye mumwe wavo ari kuchembera. Kuderedza kusagadzikana kunouya, akati wandei akagadzirwa ...
Mogeji kuchengetedzwa kwakanyoreswa, uko kunopihwa pasi pechibvumirano
Mogeji zvikwereti zvinoratidzirwa nekuvapo kwechibvumirano muchimiro chezvivakwa. Rudzi urwu rwekutengeserana runoda kusimbiswa zviri pamutemo nerubatsiro rwegwaro rakakosha, nekuti chikwereti chezvekutengesa zvivakwa chikwereti chemari yakakura kwazvo ...
Chikwereti chemutengi ndi ... Chimbadzo chemutengo wechikwereti chemutengi muSberbank
Kukweretesa kwave kwakasimbiswa muhupenyu hwevamwe vedu semukana wekukurumidza kugamuchira mari yezvimwe zvinodiwa. Nekuda kwebasa iri, munhu haafanire kukwereta kushamwari kana kune vazhinji ...
Iyi yekubhadhara system iri nyore kushanda nayo kupfuura chero imwe. Simudza kumusoro account yako, bvisa mari, ubhadhare pamhepo kune zvinhu kana masevhisi, faindi kana zvikwereti uchishandisa QIWI chikwama chemagetsi ...
Iri zita nesurname - Philip Kotler - taura zvishoma kuruzhinji. Uyu haazi mukurumbira wemufirimu, kwete muterevhizheni wepaTV, iwo hupenyu hwehupenyu hwega chero makuhwa pamusuwo anoziva. Kotler ...
Wakambonzwa nezve masemina uye kudzidziswa, iwo musoro wenyaya ndeye nzira inotarisana nevatengi yekuita bhizinesi? Ngatitarisei kuti ndeapi mabasa aya uye kuti anogona kubatsira sei kwauri kana ...
Chii chingave chinonakidza kupfuura kutenga chishandiso chitsva, kunyanya kana "chinhu chitsva" chiri icho chaicho chaunoda, pamutengo unodhura uye unounzwa kumba kwako nekunyemwerera vatakuri? Asi musika watove ...
Iko kiyi kune yakakwira uye yepamusoro mhando chirimwa chembatatisi hakusi kungoita nguva uye kujairika kwezvekurima zviitiko, asiwo sarudzo chaiyo yezvakasiyana. Panyaya yekuravira uye hunhu hwechigadzirwa, inokunda zvinopesana nekumashure kwevamwe ...
"Bhora" - yemahombekombe missile system
Basa rekuona kuchengetedzwa kwemiganhu yegungwa kwakakodzera kumatunhu ese ane gungwa rakareba. Chero nyika inoteedzera yakazvimirira mutemo wekunze inogona kutya kurwiswa munzvimbo yanhasi yakaoma yezvematongerwo enyika. Kune iyo Russian Federation, ...
Mutengesi wese anovavarira kuwedzera kutengesa kwavo. Maitiro aya hunyanzvi chaihwo, ruzivo rwemitemo yekutanga iyo inofanirwa kutungamira mukubudirira. Iwo matanho makuru ekutengesa, ayo akafanana kune makuru mashandisiro ...
Casino "Farao": wongororo uye zvakataurwa nevatambi. Zvinoita here kurova Farao kasino?
Pamhepo kasino "Farao" ndeyevaraidzo nekutandara. Kune vanhu vazhinji kutenderera pasirese, pamhepo kasino mitambo yave ndiyo inonyanya kufarirwa fomu yevaraidzo. Pamhepo kasino "Farao" "Farao" inopa vashanyi vayo mamiriro akanakisa ...
Mibvunzo ye56 mu database yakagadzirwa mu 0,664 masekondi.